Iphephancwadi elityikitywe nguSteve Jobs lifandelwa i- $ 50.000 | Ndisuka mac
Yonke into enxulumene neApple, kule minyaka idlulileyo ibiyinto yokuqokelelwa, ngakumbi ukuba sithetha ngeemodeli zokuqala ezathi zaziswa yiWozniak neMisebenzi kwintengiso. Ngeli thuba, sithethe ngefandesi ebibanjwe yi-RR Ifandesi kutshanje, ifandesi apho iingcali zeentsomi ze-Apple zazinokubakho fumana imagazini esayinwe nguSteve Jobs.
Yintoni ekhethekileyo malunga nemagazini elusizi esayinwe nguSteve Jobs? USteve Jobs wayengenguye umntu othanda ukusayina ii-autographs, enyanisweni, ixesha elininzi wala, kodwa umnini-magazini onethamsanqa, uWilliams Umphuhlisi wangaphambili wenkampani yeLotus Corporation, wanyanzelisa de waphumelela.
Yonke le nto yenzeka ngo-1988, kumnyhadala apho uSteve Jobs wazisa khona ikhompyutha ye-NEXT eyayizinyaswe nguWilliams, owayesandula ukuthenga kwiNewsweek apho kwakuza kuvela iMisebenzi njengomntu obalaseleyo eqweqweni. Ukuphela kwentetho, uWilliams, onwabile ngumsebenzi, waya kuye ukuba atyikitye i-autograph, Ukufumana impendulo: andizisayini ii-autographs.
UWilliams, umfutshane kwaye akonqenanga, kwaye ebusweni bokwala, wabongoza uJobs ukuba abhale into evela entliziyweni yakhe. Imisebenzi kwangoko yathatha imagazini kwaye ubhale "Ndiyathanda ukwenza" Wayisayina ikopi, ngaphandle kokukrwelela kuqala igama lothando, eliqinisekisa uthando awayenalo lokudala kunye noyilo
Kuzo zonke ezi zinto, uWilliams wayigcina le magazini kwibhokisi yebhanki de waziva ukuba lixesha lokuba ayigalele aze afumane ipinki elungileyo, ethe yajika yangama- $ 50.587. Imagazini ekuthethwa ngayo yapapashwa ngo-Okthobha 24, 1988 kwaye kuqweqwe lwayo sibona umfana, eneenwele, USteve Jobs uncike kwi-NEXT, indalo yakhe yokuqala emva kokushiya iApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imagazini etyikitywe nguSteve Jobs efandeswe nge $ 50.000
I-Telegraph ihlaziywa kwakhona kwaye kule meko ichukumisa uguqulelo 3.5.3